TweetTwo: Meseji Yakarurama, Nguva Yakakodzera, Nzvimbo Yakarurama | Martech Zone
Chipiri, August 30, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Fungidzira iwe uri chitoro chiri kunetseka kana yekudyira asi pasi pemugwagwa yaive yakabatikana Starbucks. Iwe ungawana sei kusvika kune avo vanhu muStarbucks? TweetTwo iri sevhisi nyowani inoongorora cheke-chevanhu kupinda paTwitter uye inotumira iyo Tweet kwavari kana ivo vari mukati mekugadzwa kwako. Nick carter, munyori weMartech blog, akagadzira iro basa rine hunyanzvi.
Heino vhidhiyo huru inotsanangura sevhisi:
Nick akagadzira sevhisi kuti atange kuona kana tweet yagadzirwa panzvimbo iri padyo nekuwedzera kukona-mukati - kusimbiswa kwakanaka kwekuti mushandisi ari padyo. Iri izano rakanaka, rinopa meseji panguva nenzvimbo pazvinenge zvakakodzera. Kune akawanda akasiyana mafomu eichi.
WordPress: Isa Jetpack uye Bvumira Hovercards